IOS 8.3 Download rohy | Vaovao IPhone
Nanaitra kinova vaovao momba ny iOS 8 i Appel androany tolakandro. Tonga ny takelaka vaovaon'ny rafitra fikirakirany finday, iOS 8.3 taorian'ny Betas marobe ary tsy nisy fampitandremana, ary mitondra lisitra fanatsarana, fanamboarana bibikely, ary fiasa vaovao toa an'i Emoji miaraka amin'ny loko hafa amin'ny hoditra, ary koa ny hafa natokana ho an'ny tontolon'ny Apple (Apple Watch, iMac ...). Ny fanavaozana dia azo alaina amin'ny rehetra ankehitriny amin'ny endrika fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA, na avy amin'ny iTunes. Fa raha te-hisintona azy mivantana avy amin'ny mpizara Apple ianao hampiasa azy io isaky ny tianao, eto dia atolotray anao rohy ofisialy rehetra ho an'ny fitaovana rehetra manohana.
iPad Air 2 Wi-Fi + finday
iPad (Modely faha-4 A1458)
iPad (Modely faha-4 A1459)
iPad (Modely faha-4 A1460)
iPad Wi-Fi taranaka fahatelo
iPad Wi-Fi + Cellular (maodely ATT)
iPad Wi-Fi + Cellular (modely Verizon)
iPod touch (taranaka faha-5)
Tadidio fa ity kinova vaovao ity tsy mifanaraka amin'ny jailbreak, Toy ny 8.2, ary mbola tsy manana vaovao momba ny fotoana mety hisian'ny Jailbreak vaovao azo alaina amin'ireo kinova ireo izahay. Hampahafantarinay anao ara-potoana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Rohy fampidinana IOS 8.3
Ahoana ny fomba hanaovana hitsin-dàlana amin'ny pejin-tranonkala amin'ny iPhone
Apple nandefa ny iOS 8.3 ary ireo no vaovao